I-CSA iwahoxisile amacala abethweswe uBoucher
AHOXISIWE amacala okucwasa ngokwebala abebekwe uMark Boucher umqeqeshi weqembu lesizwe lekhilikithi Isithombe: BACKPAGEPIX
IBHODI leCricket South Africa seliwahoxisile ngokusemthethweni wonke amacala abebekwe umqeqeshi weqembu lesizwe labesilisa, uMark Boucher.
Bekumele abhekane namacala okucwasa ngokwebala, phambi kwekomiti lokuqondisa ubugwegwe ngesonto elizayo kodwa ngokwesitatimende se-CSA bathole ukuthi abukho ubufakazi obanele bokusekela izinsolo abekwa zona.
Abesukela embikweni wangonyaka odlule weSocial Justice and Nation-Building (SJN) lapho uBoucher abalwa khona ngowayenguzakwabo besadlala kumaProteas, uPaul Adams, njengomunye wabantu ababecula ingoma ecwasayo.
I-CSA ibifuna nezimpendulo mayelana nokusula kuka-Enoch Nkwe, owake wabamba njengephini likaBoucher eqenjini lesizwe.
Isinqumo sokuhoxiswa kwamacala sithathwe ngemuva kokuthi u-Adams noNkwe beveze ukuthi ngeke bafakaze, sasekelwa uphenyo obelwenziwe yiCSA nokuthi owayengumqondisi wekhilikithi weCSA, uGraeme Smith, ubesevele ephume phambili ecaleni elifanayo.
"Isinqumo sokuhoxisa amacala siletha isiphetho kulolu daba obeluphakathi kweCSA no-Mark futhi sizokwenza ukuthi bakwazi ukugxila ezindabeni zekhilikithi lapho sithemba ukuthi uMark namaProteas bazoqhubeka nokuthuthuka khona," kusho usihlalo webhodi le-CSA, uLawson Naidoo esitatimendeni sangoLwesibili.
"Inhloso ye-SJN kwakungeyona eyokukhomba abantu ngabanye kodwa bekuwukunikeza abantu ababandakanyeka kwikhilikithi inkundla yokuthi babelane ngolwazi mayelana nezihlava ezifana nokucwasana ngokwebala kanye nangokobulili bese kuyalungiswa."
UBoucher usamukele lesi sinqumo futhi uthe usazimisele ngokuqhubeka nomsebenzi wakhe njengomqeqeshi weqembu labesilisa lamaProteas.
"Ngiyasamukela isinqumo se-CSA sokuhoxisa wonke amacala ebengibekwe wona. Izinsolo zokucwasa ebengibekwe zona bezingafanele futhi zingizwise ubuhlungu nomunyu," kusho uBoucher kusona isitatimende.
"Izinyanga ezedlule bezinzima kakhulu kimina nomndeni wami. Ngiyajabula ukuthi uhlelo selufinyelele esiphethweni nokuthi i-CSA yamukele ukuthi abukho ubufakazi bamacala ebengibekwe wona.
"Ngimile emazwini ami okuxolisa engawadlulisela kuPaul ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lwe-SJN ngobuhlungu abuzwa ngesikhathi engumdlali wama-Proteas. Njengoba ngasho encwadini engayibhala, ezinye zezinto ezazishiwo futhi zenziwa ngalezo zinsuku zazingalungile, ngiyaqonda manje ukuthi azamukelekile.
“Ngiyaziqhenya ngokuba yingxenye yeqembu elihlangene futhi elinesiko elisha elihlonipha wonke umuntu.
"Ngicabanga ukuthi udaba seluphothuliwe futhi angizimisele ukuphinde ngiphawule ngalo. Sengizogxila emsebenzini wami nokuyisa iqembu lama-Proteas ezingeni eliphezulu."
AmaProteas azobuyela enkundleni emidlalweni emihlanu yeT20 ne-India kuleli ngenyanga ezayo.